COLATRA FIOFANANA AMIN'NY ALIKA (VOZONA FAMPIOFANANA ALIKA ALIKA) - ALIKA
Colatra fiofanana amin'ny alika (vozona fampiofanana alika alika)
(Collar fiofanana momba ny alika Illusion)
Manana Boxer roa mandeha mandeha tsy tapaka aho, manokatra ny masoko foana aho amin'izay zavatra mety hahatonga ny diantsika hahafinaritra kokoa. Ny fomba mety mandehana alika dia ny mitazona ny alika handeha eo aorianao na aorianao, tsy ho maika mitarika. Tsy misy fihenjanana alika tsy tokony hisarika anao. Mba hahombiazana amin'ny fanatanterahana izany dia asaina hitazomana ny vozona / vozon'akanjo ambony hatoka, hanome anao fifehezana bebe kokoa Izany no ataon'ny mpikarakara fampisehoana alika, ary misy antony tena tsara mahatonga azy io hiasa.
Efa nanandrana fomba maro aho.
Vakana voakenda. Na izany aza, rehefa tratra ny tanjonao ny mandeha tsy misintona ny alika dia mihintsana hatrany am-pototry ny vozon'ny alika ny vozona koka, izay faritra matanjaka indrindra amin'ny hatoka. Noho izany, raha manomboka misarika ilay alika dia sarotra ny manitsy azy tsara amin'ny fisintomana fohy mialoha. Masiaka koa ny fampiasana an'io vozon'akanjo io raha tsy hampianarinao ny alika tsy hisintona. Ny vozon'akanjo dia natao hanomezana fanitsiana amin'ny fisintomana fa tsy ho voakenda foana ilay alika. Mihatra amin'ny vozon'akanjoko ihany koa io.
Izaho koa dia nanandrana nanodina ny fehin-kibo ary nanakodia izany tamin'ny vozony. Fifanarahana iray ihany, mianjera izy rehefa mandeha ianao ary mahita foana ny tenanao fa tsy maintsy manamboatra azy. Nanapa-kevitra ny hanandrana ny Illusion Dog Training Collar aho, izay noforonin'ny vadin'i Cesar Millan, Illusion. Tsikaritro avy hatrany ny fahasamihafana amin'ny fomba fandehanan'ny alikako.
Andao jerena akaiky ...
Izany no toa azy avy tao anaty kitapo. Izy io dia miaraka amin'ny firaka kely izay mametaka amin'ny vozon'akanjoko, izay hitako fa ny halehibeny tonga lafatra. Tady roa no mihodidina ny vozon'ny alika, izay mitazona ny tadiny ambony amin'ny toerany. Ity tady ambony ity izay ampiasainao hitarika ilay alika.
Mba hametrahana ny vozon'akanjo, sintomy ireo sarimihetsika mba hamotsorana ireo tadiny ...
Ho toy izao ny vozona ...
Atsofohy eo amin'ny lohan'ny alika ny ampahany amin'ny kofehy ...
Ampidiro ao anaty horonantsary ny faran'ny tadiny ary apetaho amin'ny toerany ny tadiny ...
Tokony ho marefo ny vozon'akanjo, fa tsy tery…
Toy izao ny endriny rehefa mandeha tsara ny vozon'akanjo.
Vehivavy Boxer mitafy ny vozon'akanjo Illusion
Lehilahy mpanao ady totohondry mitafy ny vozon'akanjo Illusion
Vonona ny handeha hitsangatsangana daholo isika!
Nahamarika fiovana lehibe teo amin'ny fomba nandehanan'ny Boxers aho. Namaly tsara ny vozon'akanjoko izy ireo. Tena mora ny nanitsy azy ireo tamin'ny tos fohy.
Ny tanjon'ity vozon'akanjo ity dia ny mandeha tsy misy fihenjanana mialoha. Ny famolavolana ny vozona dia mitazona ny vozon'akanjoko ho avo hatrany amin'ny vozona, fa tsy midina eo akaikin'ny soroka, izay teboka matanjaka indrindra amin'ny alika. Raha hampiasa an'io vozon'akanjo io ianao dia tokony ho azonao antoka ny ombelahin-tongonao alika. Mamela a alika hisintona eo alohany mandritra ny diany dia tsy atoro anao, satria manamafy amin'ny alika fa izy no mpitarika ny fonosanao. Raha iray amin'ireo olona tsy mikasa ny hampianatra ny alikao voditongotra ianao ary hamela azy hisintona mandritra ny dia an-tongotra dia tsy natao ho anao ity vozon'akanjo ity.
Fanamarihana: ity vozon'akanjoko ity dia tsy asaina ho an'ny alika izay ny vozony dia mirefy latsaky ny 13 santimetatra eo am-potony, na milanja 18 lbs. Ny alika misy olana amin'ny fifohana rivotra, toy ny 'tarehy voatosika' izay mametra ny alika miaina miaraka amin'ny aretin-tratra na olana amin'ny tenda, toy ny Pomeranianina sy ny alika manana hatoka lava be, toa ny Greyhounds, dia TSY tokony hampiasa ilay vozon'akanjo. Ny vozona dia tsy natao ho an'ny alika latsaky ny iray taona.
Mpanoratra Sharon Maguire©Ivotoerana fampahalalana momba ny alika®Zo rehetra voatokana
Fanabeazana ho alika voajanahary
Fomba fiainana io
Ezaka ataon'ny vondrona
Maninona ny alika no tsy maintsy mpanaraka
Inona no dikan'ny hoe manjaka?
Alika ihany no mila fitiavana
Tendrombohitra alika samihafa
Fiteny amin'ny alika
Mijanona eo amin'ny fonosanao
Fiofanana alika vs. fitondran-tena alika
Sazy vs. fanitsiana amin'ny alika
Mametraka ny alikanao ve ianao raha tsy mahomby?
Tsy fahampian'ny fahalalan'ny alika voajanahary
Ilay Alika Grouchy
Miasa amin'ny alika matahotra
Alika taloha, hafetsena vaovao
Fahatakarana ny sain'ny alika
Henoy ny Alika
Ny alika olombelona
Fahefana momba ny tetikasa
Nampijalina ny alikako
Fanamafisana tsara: Ampy ve izany?
Alika olon-dehibe sy alika kely
Fa maninona ny alika no nanao an'izany?
Fomba mety handehanana alika
Ny diany: mandalo alika hafa
Alika sy fihetseham-po amin'ny olombelona
Manavakavaka ve ny alika?
Ny fiheveran'ny alika
Alika: Tahotra ny oram-baratra sy ny afomanga
Manome alika manampy ny alika amin'ny olana
Mampianatra alika hanaja ny ankizy
Fifandraisana amin'ny olona mety amin'ny alika
Tompon'ny alika tsy mahalala fomba
Institiota famahanana kaninina
Human to Dog No-No's: Ny alikanao
Human to Dog No-No's: Alika hafa
FAQ Momba ny Alika
Ny fanahiana amin'ny fisarahana amin'ny alika
Fihetsika manjakazaka amin'ny alika
Ilay alika manoa
Mitondra an-trano ilay zazakely vao teraka
Fametrahana sy fitazonana ny toeran'ny Alpha
Tobin'ny Alpha Boot ho an'ny Alika
Mijanona alika mitsambikina
Fampiasana Psychology momba ny alika mitsambikina
Fiara manenjika alika
Collars fampiofanana. Tokony hampiasaina ve izy ireo?
Mamono sy mamono ny alikanao
Iza no mora mirona, alika lahy na vavy?
Fikorontanana: Mpiambin-drona pupil
Fiarovana ny alikanao amin'ny fanafihana alika
SPCA fialofana famonoana olona
Fahafatesana tsy misy dikany, alika diso fandray
Mahagaga Inona no vitan'ny mpitondra kely
Manova alika mpamonjy
Famaritana karazana trondro ADN
Fitaizana alika kely
Fitaizana alika kely Alfa
Fiompiana afovoan'ny alika kely
Fitaizana lamosin'ny alika kely
Dingana fampivoarana puppy
Mampahafantatra boaty vaovao amin'ny alika kely na alika
Fitsapana toetran'ny puppy
Ady alika - Fahatakarana ny fonosanao
Fahatakarana ny alikanao na ny alika
Fiaraha-miasa amin'ny alikao
Tokony hahazo alika faharoa ve aho
Tsy voafehy ve ny alikanao?
Collar fiofanana amin'ny alika Illusion
Sarin'ny alika ambony
Fampiofanana ny alikanao na ny alikanao
Vonona ny alika ve ianao?
Mpiompy vs. famonjena
Tadiavo ny alika lavorary
Tratra tao amin'ny lalàna
Eto ny fonosan'ny alika!
Boky sy DVD alika voatondro
mastiff anglisy sy lab mix
fifangaroana volamena retriever sy yorkie
alika kely teacup shar pei puppy
mifangaro amin'ny bulldog amerikana
boxer sy amerikana bulldog mix